Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - hfm-alahady
Alahady Manao ny tenin'Andriamanitra ho antsika
Mianatra mandray ny tombotsoa avy amin’ny heriny
Tsy singa mande irery ny aina. Ny zava-manan'aina dia miankina amina singa maromaro ivelan'ny vatany mba ho velon. Rano, sakafo, rivotra madio—raha tsy hilaza afa tsy vitsivitsy isika—dia hiankinan'ny fahavelomana.
Avy amin'ny fomba fijery ara-baiboly, Andriamanitra irery ihany no mihazona sy mitahiry ny aina izay eo anivon'ny tontolo andala-pitotonganana sy tontolo maneho ny taranak'olombelona andalam-pahandringanana. Ny aina dia voahazona amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra. Marina indrindra izany eo amin'ny fiainana ara-panahintsika, izay mila hery ivelan'ny herin'ny tenantsika mba hitoetra mavitrika.
Andriamanitra sy ny Teny
Hoy ny mpanao Salamo, “Ny tenin'Andriamanitra no nanaovana ny Lanitra” (Sal. 33:6). Ny famoronana amin'ny ankapobeny sy ny antsipiriany dia àry tamin'ny alalan'ny herin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny zanak'olombelona izy tenany dia tsy velona amin'ny mofo ihany, fa "amin'ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra" (Deot. 8:3).
Ny fifandraisana eo amin'ny aina sy ny Tenin'Andriamanitra dia lalina, midadasika ary tsy miova. Ny Teny izay nahariana dia iray ihany amin'ny Teny izay mihazona tsy misy fiatoana ny famoronana. Ny herin'Andriamanitra dia ambara amintsika ao amin'ny Teniny, Izy miteny amintsika.
Amin'ny alalan'ny Teniny Andriamanitra dia miteny amintsika, amin'ny toe-javatra manokana hianantsika, manambara amin'ny olony ny drafitrany sy ny sitrapony ho an'ireo Izy. MIkendry mandrakariva ny ahasoa antsika ny Teniny, satria "Tsara izany" (Isa. 39:8). Naheno ny feon'Andriamanitra niteny tamin'izy ireo teo an-tendrombohitra Sinay ireo zanak'israely, nanome azy ny "fitsipika mahitsy sy lalàna marina ary fomba sy didy tsara” (Neh. 9:13). Matetika dia maka hendrika teny fikasana ny Teny izay afaka hitokisantsika sy afaka manambara mialoha sahady ny fahatanterahan'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ho antsika. (Sal. 105:42-45).
Miteny amin'ny olona ny amin'ny herin'ny Teny Masina i Solomona: “Hisaorana anie Jehovah, Izay nanome fitsharana ho an'ny Israely olony araka izay rehetra nolazainy; tsy misy latsaka na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony” (1 Mpanj 8:56). Azo hitokiana sy hianteherana ny Tenin'Andriamanitra satria manatanteraka mandrakariva ny teny fikasany Izy; "Fa mahitsy ny Tenin'i Jehovah: ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa" (Sal. 33:4). Andriamanitra dia miasa mifanaraka tsara amin'izay zavatra ambarany, Andriamanitry ny fiandrianana Izy.
Jesosy sy ny Teny
Mihoatra lavitra noho ny kabary sy ny toriteny loakan'ny vavan'olona masina ny Tenin'Andriamanitra. HIta maso izy; “Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra” (Jaona 1:1-3). Io Ilay Teny azo nitokisana,niankinana, ary Teny manan-kerin'Andriamanitra izay nomena ny olony tamin'ny andron'ny Testamenta Taloha. Fa ao amin'ny Testamenta vaovao dia zavatra be voninahitra izay tsy nandrasana no tonga; "Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsikaary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ny Lahitokanaavy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” (and.14).
Ao amin'i Jesosy, Ilay Teny, dia afaka mahita ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika isika ary ny asam-panavotana izay ataony eo amin'ny toeran'ny olombelona mpanota. Ny fahenoina ny Teniny dia tena mahomby satria Andriamanitra Jesosy no miteny amintsika (Jaona 14:10). Fa noho ny Tenin'Andriamanitra tonga nofo, Jesosy no Ilay Tenin'ny Fahamarinana (2 Kor. 6:7) Tenin'ny fampihavanana (2 Kor. 5:19) ary famonjena (Asa 13:26); Izy no tenin'ny Hazo fijaliana (1 Kor. 1:18). Izy no fahamarinana, ary koa Ilay Tokana izay ao amin'ny zava-miafin'ny fahatongavana nofo mampiray an'Andriamanitra sy ny olombolona, naneho teo amin'ny hazo fijaliana ny hery fanavotan'ny Tenin'Andriamaintra.
Andriamanitra dia afaka tokoa ny hanatanteraka izay nolazainy. Rehefa milaza zavatra Andriamanitra, dia tanteraka izany. Mety tsy mitranga mifanaraka amin'izay noheverintsika izany, fa nefa kosa tsimaitsy hitranga.
Ny Tenin'Andriamanitra dia manatanteraka izay nolazainy sy izay nofaritany. Hoy ny mpanao Salamo "Nandefa ny teniny Izy dia nanasitrana azy, sy nanafaka azy hiala amin’ny fasany." (Sal. 107:20). Raha hampifanarahana amin'ny Teniny izay naloakan'ny vavany, dia hoy ny Tompo, “Tsy hiverina amiko foana izy, Raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako Ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” (Isa. 55:11).Rehefa miteny ny Tompo, dia tanteraka izany!
Rehefa nandrahona ny filaminan'ireo mpianatra ny tafio-drivotra nentin'ny ranomasin'ny Galily , dia nifoha Jesosy, “Ary nifoha Izy, dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin’ny ranomasina hoe: Mangìna, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra, ka tony tsara ny andro.” (Mark 4:39). Nandidy ireo fanahy maloto hiala tao amin'ireo nitoerany Izy, ary dia nivoaka ( Mark 1:25). Nanasitrana ny olon tamin'ny alalan'ny Teniny Izy (Mat. 8:8)! Fa ambonin'ny zava-drehetra, ny Teniny izay manambara famelan-keloka dia nitondra famelan-keloka ho an'ny (Mat. 9:1-7). Nanatanteraka avy atrany izay oalazany izany!
Izaho sy ny Tenin’Andriamanitra
Isika no hitenenan'ny Tenin'Andriamanitra. MIiteny amintsika Izy amin'ny maha- Mpahary sy Mpanavotra Azy, satria ilaintsika ny mahafantatra ny drafitra sy ny sitra-pony ho antsika. Tsy maintsy mivoaka miala avy ao amin'ny maizina misy antsika isika ho ao amin'ilay fahazavany mitondra fiainana misy heviny.
Rano velona sy loharanon'ny fiainana mandrakizay ny Tenin'Andriamanitra( Jaona 5:24; 6:63). Ilaintsika ny mahafantatra izany Teny izany satria, tahaka izay voaporofo teo amin'ny fiainan'i Jesosy, ny Tenin'Andriamanitra dia mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra dia miantoka ny fiainana ny fahafatesana. Noho izany, Andriamanitra dia maika ny ho henointsika: “Notadiavin'izay tsy naniry Aho sy hitan’izay tsy nitady; hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho! Inty Aho!” (Isa. 65:1).
Midika izany fa miatrika fihaikana isika ny hihaino ny Teny izay miteny amintsika ao amin'ny Soratra Masina (Isa. 66:4). Izao no fihainoana mailaka dia miaraka amin'ny fankatoavana izay lazain'ny Teny. hoy Jesosy, Jesus said, “Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy” (Mat. 7:24; sy 2 Tant. 34:21).
Ny fankatoavantsika ny Teny dia manambara fa naheno izany niteny tamintsika isika ary nampiatra izany. Zava-dehibe ihany koa ny mamaky ny Teny eo ambany fitarihan'ny Fanahy, satria ny Tenin'Andriamanitra Velona irery ihany no afaka manova antsika ( 2 Kor. 3:15-18). Tokony ho katsahantsika izany satria izany no vavolombelona ny amin'Ilay Tokana izay ahazoantsika ny fiainana mandrakizay ( Jao 5:39). Eo an-dàlam-pampiarana ny Teny dia tsy maintsy mianatra sy mandinika izany isika, mba hampitoetra ny heritrerintsika eo amin'ny tontolon'ny Teny sy ny dikan'izany ho antsika tsirairay. Azontsika atao ny mianatra ny Teny manambara ny amin'ny didy (Sal. 119:48), ny teny vavolombelona (and. 99), ary ny teny fikasana (and. 148).
Ny fampiarana ny Teny dia mitaky fahafohizam-potoana miaraka amin'izany. Tsy ara-dàlana amin'ny fon'olombelona izany ary mitaky fisarahana tanteraka amin'ny fitsilamodamohana ara-panahy. Ilaina tsy tapaka ny vavaka noho izany, satria avy amin'ny alalany ihany no ahafahantsika mangataka ny Tompo mba hametraka ao am-pontsika ny faniriana sy ny sitra-po tia ny mihaino ny Teniny.
Tokony hamelatra ny vavaka ataontsika amin'ny fanokafana nyTeny isan'andro isika . Mainka isika mamaky, mainka isika mahazo ny hafatra avy amin'izany. Tsy tokony ho kivy isika satria tsy vitantsika ny ahazo ny zavatra rehetra voalaza ao. Mamakia fotsiny, aoka ho avelantsika hilentika ao an-tsaintsika tsara ny hevitry ny Teny. Amin'izany dingana izany dia ho diovin'Andriamanitra ny heritrerintsika, ary hanova antsika miandàlana ny herin'ny Fanahy.
Rehefa mihaino isika, mamaky ary mianatra ny Teny, dia hisy zava-mahagaga hiseho: Kristy, Ilay Teny, dia ho avy hitoetra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny finoana (Efes. 3:17).
Velona ny Teny, noho izany afaka hamelona antsika Izany: “a velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, . . . ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo” (Heb. 4:12). Koa satria velona Izy, dia afaka manatanteraka izay voambarany eo amin'ny fianantsika Izy. Afaka mino izany isika satria Ilay Tokana izay miteny amintsika amin'ny alalan'ny Teny dia azo itokiana ary manana hery hanatanteraka izay efa nampanantenainy.
Andeha ary hamela ny Teny hanabe antsika isan'andro isika (2 Tim. 3:15). Andeha hamela Azy hampahery antsika rehefa tojo olana, fakam-panahy, ary fahoriana isika (Sal. 119:161, 162). Aoka ny fanantenana hita ao amin'ny pejiny hameno fifaliana ny fontsika (Sal. 56:10, 11; 2 Kor. 1:20).
Aoka ny Tenin'ny hazo fijaliana hameno ny fontsika ary hirehitra toy ny afo, mba hanamasina antsika amin'ny fanompoana ny Tompo sy fanompoana ny hafa. ( Jer. 23:29).
1. Miresaka amintsika amin’ny alalan’ny famoronana Andriamanitra. Inona amin’ireo asan’ny natiora no hamantaranao mivantana ny hery mihazona sy ny herin’ny famoronan’Andriamanitra?
2. Ny herin’ny Tenin’Andriamanitra ihany koa dia voaporofo teo amin’ny fianan’i Jesosy sy ny asa fanompoany teto an-tany. Inona tamin’ireo tantaram-piainan’i Jesosy no ahitanao ny herin’ny Tenin’Andriamanitra mazava?
3. Mivelatra ao amin’ny Tenin’ny famonjena ihany koa ny herin’Andriamanitra ary hita eo amin’n fiainantsika tsirairay avy. Ahoana no fahatsapanao ny herin’ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao manokana?
Mialoha kely ny fisotroany ronono tamin’ny 2011, Angel Manuel Rodríguez dia nanompo amin’ny maha lehiben’ny fianarana fikarohana ara-baiboly. any Texas izy ankehitriny no mipetraka.